Xinhua Myanmar - C919 လေယာဉ်ကို China Eastern Airlines လေကြောင်းလိုင်းသို့ ပထမဦးဆုံး ပေးပို့
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ရှင်းကျန်းဝေဂါ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ Turpan မြို့ရှိ Turpan Jiaohe လေဆိပ်တွင် C919 ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တစ်စင်း ဆင်းသက်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) Economy
ရှန်ဟိုင်း၊ မတ် ၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ပြည်တွင်းထုတ် C919 ခရီးသည်တင် လေယာဉ်အား ဈေးကွက်အတွင်း တရားဝင်ရောက်ရှိရန် China Eastern Airlines နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး လေယာဉ်ကော်ပိုရေးရှင်း(COMAC) တို့ကြား လေယာဉ်ငါးစင်း ဝယ်ယူရန်အတွက် မတ် ၁ ရက်က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လေယာဉ်အသစ်များကို ရှန်ဟိုင်းမှ ပေကျင်း၊ ကွမ်ကျိုး၊ ဆန်းကျန့်နှင့် ချိန်တူး စသည့်လမ်းကြောင်းခရီးစဉ်များ၌ အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လေကြောင်းကုမ္ပဏီက ပြောခဲ့သည်။
China Eastern Airlines လေကြောင်းလိုင်းအနေဖြင့် C919 ထုတ်လုပ်မှုစတင်စဉ်ကတည်းက နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ပါဝင်လျက်ရှိကြောင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် C919 က COMAC နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မူဘောင်သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး C919 လေယာဉ် အသုံးပြုသည့် လေကြောင်းလိုင်း ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သော C919 လေယာဉ်တွင် ထိုင်ခုံ ၁၅၈-၁၇၄ နေရာပါရှိပြီး ၄,၀၇၅ မှ ၅,၅၅၅ ကီလိုမီတာ ထိ ပျံသန်းနိုင်ကြောင်း၊ ပွဲဦးထွက်ပျံသန်းမှုကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
The C919, China's first self-developed trunk jetliner, has 158-174 seats andarange of 4,075-5,555 km. The plane conducted its successful maiden flight in 2017. ■
A C919 large passenger aircraft lands at the Turpan Jiaohe Airport in Turpan, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, June 28, 2020. (Photo by Liu Jian/Xinhua)
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံက RCEP သဘောတူညီချက်တွင် တရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးပြော
Next Article တရုတ်နိုင်ငံ ဟွာလုံဝမ်း အဏုမြူဓာတ်ပေါင်းဖို ပထမဆုံးနျူးကလီးယားယူနစ်ကို စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန် စတင်လည်ပတ်